ချိန်ကိုက်မိုင်းတွေ ဆက်တိုက်တွေ့နေတဲ့ မြဝတီမြို့ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားမြေမြှုပ်မိုင်း ကွင်းထဲမှာ ရှင်သန်ကြသူများဟင်္သာတ ခရိုင်ပညာရေးမှူးနှင့် ဆရာမ ၃ ဦးကို ကျောင်းသား မိဘများ ဆန္ဒပြ“မိုင်းက လုံးဝ အဓိပ္ပာယ် မရှိတဲ့ တိုက်ပွဲ တခုပါပဲ”ကယား ဒေသခံများ မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ် ဆက်လက်ခံနေရ
tharthar November 29, 2012 - 2:20 pm i like update news
Reply Khin November 29, 2012 - 6:14 pm We should have calm and courage. Don’t fell in the trap. We should unite with Daw Suu. She knows the trick of politic.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 30, 2012 - 3:38 am Khin ပြောတာကို ကျွန်မလဲ လက်ခံတယ်။ ပြည်သူ လက်မခံနိုင်တာကို လုပ်ပြီး တတိုင်းပြည်လုံး ဆူအောင်ဖွပြီး စစ်တပ်က ၀င် အာဏာသိမ်းမှာ စိုးရတယ်။ အန်တီစု က အကွက် ကြိုမြင်တယ်။ သည်တော့ သူပြောတာ နားထောင်ပြီး သူ ဖြစ်စေချင်တာ လုပ်ကြပါ။ တခုရှိတာက တခါတလေ သူရောက်နေတဲ့ နေရာ၊ အခြေအနေအရ အန်တီစုက ပွင့်လင်းစွာ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလို့ မရဘူး။ သည်တော့ သူ့ စကားကို အသေအချာ နားထောင်ပါ၊ သဘော ပေါက်အောင် ကျိုးစားပါ။ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့ကလဲ အန်တီစု သွယ်ဝိုက် ပြောလိုတာကို ဖြည့်စွက် ပြောတတ်ပါတယ်။ သူတို့ သုံးယောက်စလုံး ဘာတွေ ပြောသလဲ အသေအချာ နားထောင်ပြီး ညီညွတ်စွာ ၀န်းရံ လုပ်ကြသင့်တယ် မြင်ပါတယ်။
Reply kyi thar November 29, 2012 - 8:43 pm တရုတ်ကုမဏ္ဏီတစ်ခုအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေအကြမ်းဖက်နှိမိနင်းခံရတာပါ
Reply Kyaw Win November 29, 2012 - 11:55 pm Black money circulation isalot at MEC and UMEHL.
Reply ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) November 30, 2012 - 12:22 am တရုတ်ပစ္စည်း မှန်သမျှ မ၀ယ်နဲ့
Reply Sai Lao November 30, 2012 - 1:17 pm Yes, right…………man.
Reply ohnmar November 30, 2012 - 4:09 pm ခွန်စိမ်းမောင်ပြောတာမှန်တယ်တစ်ရုတ်ပစ္စည်းမဝယ်နဲ့မသုံးနဲ့သပိတ်မှောက်ကြ။
Reply မင်းမျိုးနိုင် November 30, 2012 - 3:20 am စိန်နားကပ်အရောင်နဲ့ပါးပြောင်နေတဲ့ထိပ်ပြောင်ကြီးရေ။ ခုပြသနာဘယ်လိုရှင်းမှာလဲ။တခြား
Reply ပါကြီးဖိုး November 30, 2012 - 5:36 am ဦးပိုင်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါ။ အဲဒီဦးပိုင်ထဲမှာ ဦးသန်းရွှေရဲ့ ရှယ်ယာ ဘယ်လောက်ပါနေမှန်းမှ မသိတာ။ သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာရင်တော့ ဘာကိုမှ ဂရုစိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအခင်းမှာ ထပ်မံပြသလိုက်ပါပြီ။ သူတို့အတွက် လူ့အခွင့်အရေးတို့ လူသားချင်းစာနာမှုတို့ ဒီမိုကရေစီတို့ဆိုတာဟာ သူတုိ့ရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုလောက် အရေးကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သက်သေပြလိုက်တာပါ။ ငရဲဘဝက လာကြတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ငရဲကိုပဲ မုချပြန်သွားကြမှာပါ။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကိုခိုး၊ လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်ယာတွေကို အဓမ္မလိုက်သိမ်း၊ လူသတ်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်၊….ဒီလူတွေအတွက် ငရဲမှတစ်ပါး အခြားမရှိပါ။ အကြမ်းဖတ်နှိမ်နှင်းမှုမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ ရဲတွေဟာ ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲကလည်း ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။ ရဲတွေဆိုတာ အောက်ခြေလူတန်းစား မိသားစုတွေက လာကြသူတွေသာ များမှာပါ။အခုတော့ ရဲတွေဟာ အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခိုင်းသမျှ လိုက်လုပ်နေကြရတယ်။ ဥာဏ်မရှိရဲလုပ်နေကြရပေမယ့် သူတို့ခမျာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အသုံးချခံဘဝ ရောက်နေကြရတယ်။
Reply tin aung kyaw November 30, 2012 - 7:02 am ယခင်အစိုးရလက်ထက်က စာချုပ်ကို နိုင်ငံတကာ ရင်းနှိးမြုပ်နှံမှုတွေ ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ ယခုအချိန်မှာ မဖျက်သင့်တာမှန်ပါတယ်။ နိုင်ငံအနေနဲ့ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် မရှိဆိုရင်တောင်မှ ကတိက၀တ်ကြောင့် ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။
Reply ohnmar November 30, 2012 - 4:04 pm ဒီတစ်ခါဆန္ဒပြကြရင်တော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ဝတ်စုံတွေဝတ်ထားသင့်တယ်။
Reply aungphyo November 30, 2012 - 6:35 pm ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သေချာမေးခွန်း ထုတ်ရမယ့် အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ အမှန်ကို သေချာမသိဘဲနဲ့ ဘယ်လို ဒီမိုကရေစီဖြစ်မလဲ။ဒီမိုကရေစီတကယ်မြတ်နိုးတန်ဘိုးထားတယ်ဆိုရင် ပြည်သူကို တန်ဘိုးထားရမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်စည်းစိမ်တန်ဘိုးထားတတ်ရမယ်။ ပြည်သူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာက သူတို့ ထမင်းတစ်လုပ်စာအတွက်ပါ။ သူများတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှန်ရင် ဥပဒေကို လေးစားရပါမယ်။ လုံခြုံရေးဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာ ၇ှိပါတယ်.။ဒါပေမယ့်လို့ ကိုယ်လုပ်ချင်သလိုလုပ်ဘို့မဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို စောင့်ရှောက်ပေးဘို့သာဖြစ်တယ်။ခုတော့ ဆန္ဒပြရင် အမိန့်ခံရမယ်.အမိန့်ရရင် ဆန္ဒပြရမယ်.ဒါဟာ တစ်ဘက်သက်ဥပဒေပါ။အဲဒီအချက်ကို လွှတ်တော်မှာ သေချာဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လုံခြုံရေး ။ လုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်သလို တစ်ဘက်သက်လုပ်ခွင့် ပေးလို့မရပါဘူး။ ဥပဒေကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ လူရမ်းကားဆန်ဆန် သတ်ဖြတ် ညှင်းဆဲတာတွေကို ထိထိေ၇ာက်ရောက် အရေးယူပေးဘို့လိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီ ပြည်သူဆိုတာ ဥပဒေကို အားကိုးပြီးတော့ ဘဝကို လုံခြုံစွာ နေချင်တာပါ ဥပဒေကမှ အကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ သေချာပြောလိုက်ပါရစေ ဒီမိုကရေစီ ဘယ်တော့မှ မစစ်ဘူးဆိုတာပါပဲ ။
Reply soe san November 30, 2012 - 7:43 pm အလွန်စက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့ နှိမ်နှင်းမှုပါ။ သံဃာသွေးမြေကျ ရပြန်ပြီ။
Replyုposoidon November 30, 2012 - 10:01 pm တရုတ်နဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့ အမျိုးသားသစ္စာဖေါက်ကြီးများ၊ အစိမ်းပုတ်အရောင်ချွတ် လူရောင်ဆောင်နေကြသော
Reply yi yi myint December 1, 2012 - 11:34 am ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့လုပ်နေတာလဲ။ အခုလိုအချိန်မှာဒီလိုလုပ်ရဲတဲ့သတ္တိမှားလို့ ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်ပုံငကိုနားလည်နိုင်ဘူး။မြန်မာအစိုးရကအဲလိုအရိုင်းအစိုင်းတွေမို့ရှက်မိတယ်။
Reply pnwara December 3, 2012 - 1:07 pm သမတ ကို နားလည်ရ မခက်နဲ့ လေ- သူဟာ ဘောင်းဘီချွတ်တယောက်-စစ်တပ်လာတာ- စစ်သားအတွေးဘဲရှိမှာပေါ့- ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လူလို တွေးတတ်မှာလဲ- သူတွေးတာက ဆန့် ကျင်လျှင် ဖမ်းမယ် ဆီးမယ် သတ်မယ် ဖြတ်မယ်- ဒါဘဲပေါ့-စစ်သားညာဉ်မှ မပျောက်သေးတာ။ ပျောက်ဘို့ မလွယ်သလို-ပျောက်မယ်လဲ မထင်ပါဘူး။ အရိုးစွဲ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတာကိုး။